वाङमय प्रकाश गुरागाईं
पब्लिकेसन्स नेपालयले आफ्नो क्लासिक्स् शृङ्खला अन्तर्गत सन् २०२० मा मातृकाप्रसाद कोइरालाको निबन्ध सँग्रह ‘कोशीको कथा’लाई नयाँ कलेबरमा प्रकाशित गरेको छ। प्रतिभा पुरस्कार प्रतिष्ठान, विराटनगरले २०४६ मा प्रथम पटक प्रकाशित गरेको यो पुस्तक लामो समयदेखि बजारमा उपलब्ध थिएन।
भैरव पुरस्कार रामकुमार पाँडे र राजाराम पौडेललाई साहित्यकार भैरव अर्यालको स्मृतिमा स्थापित भैरव पुरस्कार र भैरव प्रतिभा पुरस्कार क्रमशः राम कुमार पाँडे र राजाराम पौडेललाई प्रदान गरिने भएको छ।
पल्लो क्याबिन पल्लो क्याबिनमा बिस्तारै एउटा छायाँ प्रवेश गर्‍यो । छायाँ स्त्रीदेहको थियो । छायाँ समुद्रसरी लहरिंदै अघि बढिरहेको थियो । पानीको लहरजस्तै हिंडाइ पनि लयमा थिएन । पाइला असन्तुलित देखिन्थे । साँझ पातलै थियो, रमरमखालको । त्यो रमरममा क्याबिनमा लगिएको बिरामी कुनै महिला हुन् भन्ने चिन्न गाह्रो थिएन । उनको लामो तर असरल्ल कपालका कारण मैले थाहा पाइहालें, उनी महिला हुन् भन्ने ।
घाम हिउँ पग्लिए झैं पग्लिंदै–पग्लिंदै हराइसक्नुपर्ने थियो उहिल्यै देशको छातीमा जमेको जात–व्यवस्था म खोजिरहेको छु घामको प्रचण्ड राप खोइ ! कहाँ लागेको छ घाम ?
म आफैं जन्मेको हुँ: रोशन मेरा तीन जना मानस–सन्तान छन्। मैले मनमनै जन्माएका । दुई पुत्र, एक पुत्री। जसमध्ये एउटा हो रोशन। हरेक बिहान निद्राबाट ब्यूँझेपछि म मेरा मानस–सन्तानहरूलाई दुई घण्टा जति समय दिन्छु । बेलुका सुत्नुअघि एक घण्टा । यसरी दिनको करिबन तीन घण्टा म उनीहरूसँग हुन्छु । कहिले हामी सँगसँगै गीत सुन्छौं। कहिले सिनेमा हेर्छौं। कहिले शहरका पातला कला प्रदर्शनीमा छिर्छौं। कहिले बाक्ला थियटरतिर बरालिन्छौं।
साइनो लमजुङ तुर्लुङकोट ..... सररर हावा चल्यो लाँकुरीको बोट ..... पिंढीको थाममा झुण्डिएको रेडियोमा बीमाकुमारी दुराको सुरिलो स्वर बाटोसम्मै सुनियो । तगारो खुल्लै थियो । घाम तापिरहेका बाख्राका पाठा मदेखि तर्सिएर बुर्कुसी मार्दै आमा भएतिर गए । गोठको माउ करायो ।
‘कवि, तिमी काम चाहिँ के गर्छौ ?’ न्यायाधीशः अनि मातृभूमिका लागि उपयोगी काम चाहिं के गर्नुभयो ? ब्रोद्स्कीः मैले कविता लेखें । यही नै मेरो काम हो । मलाई विश्वास छ... मैले जे लेखेको छु, त्यो आज मात्र होइन भविष्यको पिढीलाई पनि उपयोगी हुनेछ । भीडबाट आवाज आउँछः हेर त ! कत्रो फुर्ती !